Ukubuya kukaNtuli kuphathisa uBenni ngekhanda, kodwa elimjabulisayo - Impempe
Ukubuya kukaNtuli kuphathisa uBenni ngekhanda, kodwa elimjabulisayo
January 17, 2021 January 22, 2021 Impempe.com
Izinkinga zamagoli kuMaZulu FC zingase ziphele njengoba sekubuye isiqongqwane somgadli, uBongi Ntuli obelimele kusukela kwaqala le sizini. UNtuli washaya amagoli angu-13 kuligi ngesizini edlule, nasiza kakhulu elikhululeni Usuthu emaketangeni ezembe. Nokho selokhu kuqale le sizini yeDStv Premiership, isikhala sakhe besibonakala yize iqembu liqinise ngo-Augustine Mulenga obekwi-Orlando Pirates noSiphelele Mthembu phambili.
Umqeqeshi woSuthu, uBenni McCarthy uthe ukubuya kukaSiphesihle Maduna noNtuli kuzoletha umehluko eqenjini.
“Bobabili bahle kakhulu futhi sebenamava esigabeni sePremiership. Baziqeqeshe ngokugcwele, bazinikela kanti nezinga labo livele lahlala obala ngakho ngicabanga ukuthi ngizophathwa yikhanda uma sekumele ngiqoke abadlali abangu-20 engizohamba nabo nabangu-11 engizoqala ngabo uma sesidlala neMaritzburg United. Ngizobona nginafaka kuphi futhi kanjani,” kuchaza UMcCarthy.
Usuthu luzovakashelwa yiBlue Hearts eJohnsson Kings Park Stadium emdlalweni weligi ngeSonto ngo 3 ntambama. UMcCarthy uthe usajabule ngokuzimisela kwabadlali bakhe abangazange bazenyeze ngemuva kokushaywa yiKaizer Chiefs ngo 2-0 besekhaya ngoLwesibili.
“Ngicabanga ukuthi okubalulekile ukudlulela phambili. Asenzanga kahle ku(Bloemfontein) Celtic asangawathola amaphuzu. Sabuya sadlala neKaizer Chiefs, sadlala kahle kodwa sangawuthola umphumela ngenxa yokuthi besingekho bukhali phambili. Siphoxeke kakhulu kodwa sesidlulile lapho sesibheke ukudlala ngomdlandla nomfutho ofanayo kuMaritzburg.
“Ngijabule ngengikubone siziqeqesha ngoba ngisho ukukhahlelela ipali kubuyise ithemba,” kuchaza uMcCarthy.
Uthe lo mdlalo ubaluleke kuwo womabili amaqembu. IMaritzburg izofuna ukuqhubeka nomgqigqo wayo omuhle wakamuva nje obabone beshaya ngokulandelana iCeltic neChiefs. Kanti Usuthu lona lufuna ukungasaleli emuva kakhulu emaqenjini aphambili.
“Umdlalo ubaluleke kuwo womabili amaqembu. Thina sifuna ukuqhela kulamaqembu angemuva kwethu bese sisondela kulezi zindawo ezijabulisayo maphambili,” kuchaza uMcCarthy.
Previous Previous post: UDavids uthi bazoqhubeka ngendlela yabo yokudlala eVenda sebebhekene neLeopards
Next Next post: Unozinti weMaritzburg uncishe abadlali baMaZulu amagoli